Kuthetha ukuthini ukuphupha umgca okanye umgca wabantu? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Ukuphupha umsila
2 Ukuphupha ngomsila ... Kuthetha ntoni?
3 Ukuphupha ukuba umsila ucocekile
4 Iphupha lomgca ongcolileyo
5 Ukuphupha ukuba usekupheleni komgca
6 Ndiphuphe ndibona umgca
7 Emva kwayo yonke loo nto, ukuphupha umsila yinto elungileyo okanye embi.
Intsingiselo yokuphupha emgceni ihlala ingathandeki kwaye kwezinye iimeko isiphumo kukuvuka sicaphuka. Ukuba usebenzisa izithuthi zikawonke-wonke ukuya emsebenzini imeko iba mandundu kwaye iphupha libonakala liyinyani.
Kuxhomekeke kubungakanani bomgca, kuqhelekile ukoyisa ukudimazeka kwaye umnqweno awunyanzelekanga ukuba uhambe kuloo nto. Kodwa leyo yinto yesiqhelo kwaye akukho sizathu sokubaleka, kuba ukufezekisa iinjongo zakho kuya kufuneka ujongane nayo.
Uya kubona ukuba ukuphupha malunga noku kuya kuba nentsingiselo ekhethekileyo, kuba oko kugcinwe kubunzulu bentliziyo yakho kuzakufezeka kungekudala. Nangona kunjalo, inokuba ngaphezulu kakhulu kunoko yiyo loo nto kubalulekile ukuqhubeka apha.
Naliphi na iphupha linokukukhomba kwicala elifanelekileyo kwaye ukufuna ukuqonda linyathelo lokuqala lokuba nexesha lokulungiselela. Ukuphupha imigca kuya kuba yinto enomdla kwaye namhlanje kuya kuba nakho ukwazi ukuba kutheni.
Ukuphupha ngomsila ... Kuthetha ntoni?
Ukuba uphuphe imigca kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kwaye uzilungiselele, kuba kungekudala uza kufumana iindaba ezimnandi. Lo mnqweno uqulethwe kubunzulu bentliziyo yakho uya kuzalisekiswa kwaye ayizukuthatha thuba lide ukuba ube nezi zibonelelo.
Ukuphupha usemgceni okanye ubona ulayini unokuba nezinye intsingiselo okanye ubonise ezinye iindlela. Mhlawumbi uziva ulilolo kwaye ufuna ingqalelo ngakumbi kwiindawo zabantu abakungqongileyo.
Uqaphele ukuba ukuphupha imisila luphawu lokuba umnqweno othile uqulethwe kuwe kwaye kufuneka uzalisekiswe. Eli lixesha elifanelekileyo lokuqhubeka kwaye ufunde iintsingiselo, ngokulandelelana apho ubonakalisa khona kwaye ufumanise ukuba yintoni.
Ukuphupha ukuba umsila ucocekile
Olu hlobo lwamaphupha olucocekileyo mhlawumbi lolona luqhelekileyo kwaye lunokubonisa ukuba unothando olukhulu kubantu abakungqongileyo. Ukuqhubeka nokuwaxabisa kuya kubaluleka kubudlelwane ukuze uhlale ixesha elide kwaye usempilweni kuwo wonke umntu.
Unesakhono esikhulu sokuhlonipha isithuba saba bantu kwaye unenkululeko eyaneleyo yokubanceda ngamaxesha afanelekileyo. Ukuphupha ngomsila ococekileyo kubonisa ukuba ukwindlela elungileyo kwaye kufuneka uhlale unjalo.
Abantu bayakuqonda njengomntu onesiphiwo sokuba novelwano kwaye uthabathe wonke umntu ngobubele bakho. Kuyacetyiswa ukuba ulandele le ndlela kwaye uqhubeke ukonwabisa wonke umntu ngeendlela zakho zokuzithemba.
Iphupha lomgca ongcolileyo
Ukuphupha ngomgca ongcolileyo luphawu lokuba ubungumntu onekratshi kwaye uphakamile kunabanye. Ayisiyonto imbi konke kwaye unokulufikelela usukelo lwakho ngokwenza njalo, kodwa kunokwenzeka ukuba uphuhlise ubutshaba.
Kubonakalisiwe ukuba ifuna ukuphatha abantu hayi njengabaphikisi okanye nabachasi, kufuneka babonwe njengabantu. Kulunge ngakumbi ukwenza abahlobo kunokudala ubutshaba, kokukhona abantu abaninzi bekwicala lakho kungcono ukuba bakhule.
Uhlalutyo lobomi bakho luphawu oluyimfuneko lokuqonda iindlela ozilandelayo. Ukubeka ukuzingca ecaleni kunye nokufunda ukudibana ngakumbi kuya kuba ngumahluko kuhambo lwakho lobuchwephesha.
Ukuphupha ukuba usekupheleni komgca
Ukuphupha umgca ekugqibeleni kwawo luphawu lokuba uzive ulahliwe ngabo basondele kuwe. Isenokuba yintombi yakho, usapho lwakho, okanye abantu osebenza nabo. Into ebaluleke kakhulu kukufumanisa ukuba ungubani emva koko usebenze ekusombululeni ezo ngxaki.
Mhlawumbi lixesha lokusebenza nzima kwaye ubukho bakho buqwalaselwe kwisangqa sakho. Zama ukuhlaziya ikhabethe lakho, funda ngakumbi kwaye usebenze nzima, kuba akonelanga ukuba ulungile, ukubonisa ukuba uhlala ungoyena ufanelekileyo.
Ukuba kunokwenzeka, thetha nosapho lwakho, isangqa sakho seemvakalelo okanye ubuchwephesha kwaye uzame ukuba nolwazelelelo ngakumbi. Kunqande ukwenza izikhalazo ezibanzi kwaye uzame ukuzithemba, thetha ngendlela evakala ngathi yenye nje incoko.
Ukuba nolu hlobo lwamaphupha kufana nesilumkiso sokuba umphefumlo wakho kufuneka uqondwe ngakumbi. Kuyimfuneko ukuba umphulaphule, usebenzise utshintsho kwaye ngaphezulu kwako konke ube nezimo zengqondo ezenza ukuba ubukho bakhe baziva.
Ndiphuphe ndibona umgca
Ukuba ujongile kwaye awunantsebenzo, luphawu lokuba kufuneka ujonge ngaphakathi. Eminye iminqweno ebanjiswe ngaphambili iyakukhathaza kwaye ayikuvumeli ukuba usebenzise amathuba.
Emva kwayo yonke loo nto, ukuphupha umsila yinto elungileyo okanye embi.
Ukuba uphuphe imigca luphawu olukhulu lokuba into elungileyo izakwenzeka okanye kufuneka uzijonge. Zama ukuhlalutya okungalunganga kwaye usebenzele ukusombulula ezi ngxaki. Akukho xesha uya kukwazi ukonwabela ubomi kwaye uya kuzibulela ngokuba uneli phupha.